Ciidamada Puntland oo qabtay rag Ajnabi ah oo looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin Al-shabaab - Hablaha Media Network
Ciidamada Puntland oo qabtay rag Ajnabi ah oo looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin Al-shabaab
HMN:- Ciidamada Puntland ayaa sheegay in ay qabteen rag Ajaanib ah oo looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab.
Dadkaasi ayaa lagu soo qabtay howlgal ay ka fuliyeen ciidamada Ammaanka degaanka Garacad ee gobolka Mudug.
Ragga la qabtay ayaa la sheegay in ay wateen Doon, waxaana la socday nin Soomaali ah sida ay sheegeen Saraakiisha ciidamada maamulka Puntland.
Sarkaal ka tirsan Ciidamada Puntland ayaa sheegay in dadka ay qabteen ay u dhasheen dalka Yemen,islamarkaana ay ku waddaan baaritaano kala duwan.
Sarkaalkaasi ayaa sidoo kale tilmaamay in dadkaasi yihiin kalluumeysato iyo in ay ka tirsan Al-shabaab ay baarayaan.
“Saddexdaan Qof Labo waa Ajaanib midna waa Soomaali waxaan uga Shakisan nahay in ay yihiin Al-shabaab ama ay la shaqeeyaan Baaritaan ayaan ku wadnaa oo wixii ka soo baxa Saxaafadda waan la wadaagi doonaa”ayuu u sheegay Warbaahinta Puntland Sargaal ka tirsan Ciidamada Badda Puntland.
Puntland ayaa Shalay Ciidamo badan geysay Magaalada Garacad ee Gobolka Mudug kadib markii ay sheegeen in ay heleen Xog muujineysa in Al-shabaab ay doonayaan in ay isku Fidiyaan Magaalo Xeebeedka Garacad oo ay Weeraro ka soo qaadaan.
Hayeeshee Dhowr jeer ayaa Ciidamada Puntland ay Xeebaha Puntland ku qabteen Dad Ajaanib ah oo u badnaa Kaluumeysato lagu Eedeeyay in ay si sharci daro kuga Jilaabanayay Degaanada Puntland.